Global Voices teny Malagasy » Nomad Green: Ny fandotoan-drivotra mandritra ny ririnina any Mongolia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Aogositra 2018 3:10 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Liva Andriamanantena
Niatrika ririnina mafy ny Mongoliana tamin'ny taona 2010  ary vao mainka niteraka olana ny fandotoan-drivotra avy amin'ny fatana sy ny fandoroana saribao ataon'ny orinasa. Nanasongadina ny fahasimban'ny tontolo iainana any Mongolia ireo mpanao gazety olon-tsotra avy ao amin'ny tetikasa Nomad Green  tohanan'ny Rising Voices . Nanoratra  i Optimus (nadikan'i Azaa tamin'ny teny Anglisy) fa lasa poizina misoko miadana ho an'ny mponina ny fandotoan-drivotra an-tanàndehiben'i Mongolia be mponina indrindra:
Nanoratra avy any Ulaanbaatar, Mongolia  i Beth Ritchey ao amin'ny Bilaogy Kiva ary niresaka momba ny olana ateraky ny ‘Tranolay ‘ :
Tsy ny fandotoan-drivotra no tena olana ao amin'ny firenena. Nanoratra  i Gantsatsral.M fa (nadikan'i Mongoloo tamin'ny teny Anglisy) ny biby fiompin'izy ireo no hany fidiram-bola ho an'ny Mongoliana maro kanefa nanjary simba ny tanimbilona ary tandindonin-doza ireo biby fiompy:
Nanoratra  ny antony mahafaty ny vorona noho ny taribin'ny herinaratra ao Mongolia i Airunbulag. Nandrisika ny hampitsaharana ny varotra voromahery ( ‘faucons’) ihany koa ilay bilaogera.
Nanoratra  momba ny (dikanteny nataon'i Shinee) fihazàna ny biby masin'i Mongolia – ny amboadia izay hanimbinan-taova mba hampiasana amin'ny fitsaboana i Gerelmaa :
Niresaka  momba (dikanteny nataon'i Shinee) ny olan'ny zon'ny mpiasa tompotany Mongoliana izay miasa any amin'ny sehatry ny asa mampidi-doza tsy hazahoan-karama sy ampiasana ny fanararaotana i Battuya .
Azonao vakiana ny loharanom-baovao hafa momba ny olana mifandraika amin'ny tontolo iainana ao Mongolia avy amin'ny bilaogin'ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra Nomad Green .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/28/125012/
 ririnina mafy ny Mongoliana tamin'ny taona 2010: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2010/02/13/nomad-green-mongolia-a-disaster-in-the-making/
 tetikasa Nomad Green: https://rising.globalvoicesonline.org/projects/nomad-green-mongolia/
 Nanoratra avy any Ulaanbaatar, Mongolia: http://www.kiva.org/blog/2010/03/02/kiva-stories-from-field-mongolia-goes.html